Faaidada Ilmuhu Ka Helaan In Qoysku Hal Meel Cuntada Kuwada Cuno - Daryeel Magazine
Faaidada Ilmuhu Ka Helaan In Qoysku Hal Meel Cuntada Kuwada Cuno
Daraasad cusub oo ay Saareen khubaro u dhalatay wadanka Ingiriis, ayaa soo jeedisay in waalidku haddii uu doonaayo in ubadkiisu waxbarashada ku fiicnaado uu cuntada cashada meel ugu wada cunaan qoyska dhammaantii.
Daraasaddan oo cabsi ka muujisay waqtigan isticmaalka tiknoolajigu kor u kacay oo keenay in waalidka iyo ubadku kala mashquulaan waxay culimada cilmi-nafsiga ku takhasustay sheegeen in ay cilmi-baaristooda ku tijaabiyeen carruur da’doodu u dhaxayso 6 jir ila 11 jir, kuwaasoo dugsiga waxbarashada aad ugu fiican, bulshadana aad ugu naxariis badan, dhibaatadooduna yar tahay, waxaanay ogaadeen in ubadkaas waalidkoodu u fududeeyo in qoysku meel cuntada ku wada cuno, gaar ahaan waqtiyada habeenkii ee cashada la cunaayo.
Cilmi-barayaashu waxay sheegeen in waalidku tallaabadaas uu ku kaco toddobaadkii afar jeer, haddii kale aanay faa’iido yeelanayn waxa intaas ka yar, iyagoo tilmaamay in wax ka yar 30% qoysaska Ingiriiska in ay meel ku wada cunteeyaan habeenkii.
Xog-ururin la qaaday sannadkii 2012 oo shacabka Ingiriiska laga qaday waxay sheegtay in qoyska waalidku wada shaqeeyo ee aan fursada u helin in ubadkoodu meel ku wada cunteeyaan ay dhibaato xagga waxbarashada ah la soo daristo carruurta yar yar.
Natiijada cilmi-baaristan oo lagu daabacay jariirada Family Psychology waxa lagu sheegay in qoyska sida joogtada cuntada meel ugu wwadacuna in ubadkoodu noqdaan qaar waxbarashada ku wanaagsan, maskax ahaana dhisan, marka loo eego kuwa aan fursadaas helin.
Sidoo kale, in qoysku meel ku wada cunteeya waxay hoos u dhigta in ubadku noqdaan qaar dhaqan xumo la yimaada, taasoo ay ka hor joogsato waalidka oo ka war haya xaalada ilmahiisu ku sugan yahay
7-daan Waxyaabood Iska Ilaali Cuntada Kadib Dhibaatooyinka Balwada Cuntada Faaidada Kalluunku U Leeyahay Caruurta Yaryar Dawooyinka Gaaska Loo Cuno, Khatartooda Caafimaad Ayaa Ka Badan Waxtarkooda